AppImage nwere ngwa ngwa "AppImageHub" | Site na Linux
Na Linux anyị na-ejikarị arụnye ma ọ bụ inweta mmemme anyị ma ọ bụ nchịkọta site na usoro ngwugwu nke na-ekesa nkesa, kwuo Deb, RPM ma ọ bụ koodu isi ya n'onwe ya.
Emere nke a ka ọ dịkarịa ala ọtụtụ afọ, mana afọ ole na ole gara aga ngwa "eluigwe na ala" maka Linux bidoro ịpụta (ka ịkpọọ ha) ebe ọ bụ na enwere ike itinye ha ma ọ bụ gbaa ọsọ n'ọtụtụ nkesa Linux.
1 Ngwa Universal na Linux
2 Banyere AppImageHub
2.1 Gịnị kpatara AppImage?
Ngwa Universal na Linux
Tupu nke a Anyị na-ezo aka na atọ kacha mara amara Flatpak, Snap na Appimage, ọ bụ ezie na enwerekwa OrbitalApps (mana o doro anya na echiche ahụ anaghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ echefuru ya).
- Flatpak, amara dika xdg-ngwa rue Mee 2016, bụ ihe eji arụ ọrụ maka ntinye sọftụwia, njikwa ngwugwu yana ngwa ngwa maka gburugburu desktọọpụ Linux.
Uru ahụ na-enye gburugburu ebe a na-akpọ sandbox akpọ Bubblewrap, nke ndị ọrụ nwere ike ịme ngwa ndị dịpụrụ adịpụ na usoro ndị ọzọ
Nchịkọta ngwanrọ "snap" ha kwụ ọtọ ma rụọ ọrụ na ọtụtụ nkesa Linux.
Ha na-ekwe ka nkwekorita ngwanrọ gbagoo. Ezubere usoro a iji rụọ ọrụ maka ịntanetị nke ihe, igwe ojii, na kọmputa.
AppImage bụ usoro maka nkesa obere sọftụwia na Linux ọ dịghị mkpa maka ikikere superuser iji wụnye ngwa ahụ.
A na-ezube usoro a iji mee ka ọnụọgụ ngwanrọ nke nkesa na-adabereghị na nkesa Linux maka ndị mmepe ngwa, nke a na-akpọkwa nkwakọ ngwaahịa.
Kedu ka ha ga-esi mara Flatpak na Snap nwere weebụsaịtị ha, nke na mgbakwunye na inye usoro ntinye nke ndị a n'ọtụtụ nkesa Linux, ha nwekwara "ngwa ngwa" FlatHub na snapcraf.io.
Banyere Appimage, ihe ahụ adịghị ka nke ahụ, ebe ọ bụ na saịtị ha naanị ha na-egosi ntuziaka eji eme ihe, mana anyị nwere ike ịchọta AppImageHub nke akwadoro na GitHub nakwa na o nwere nnukwu nchịkọta ngwa nke usoro a.
AppImageHub nwere ụfọdụ atụmatụ mara mma dịka: Nweta na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ahụ, Bugtracker (iji kọọ akụkọ na ngwanrọ na ngwanrọ ahụ), Ajụjụ nke ngwa ahụ, nke a na-ajụkarị ajụjụ a na-ajụkarị yana njikọta na ntinye aka na ọrụ ahụ, site na nkwado ego.
Ọ bụghị mmemme niile nwere ọrụ ndị a. O yiri ka ọ bụ ihe metụtara onye na-ekesa ha, ọ bụrụ na ohere dị otú ahụ dị, ha jikọtara na ibe App na AppImageHub.
Site na ịhọrọ ngalaba achọrọ, eserese eserese, nchịkọta nkenke na mgbe enwere, nhọrọ ndị a kọwara n'elu. Ọrụ ndị bụ isi dịka: Nbudata ngwanrọ, onye na-ekesa ya na saịtị Github, nọkwa.
Ruo ugbu a, appimage.github.io nwere ihe karịrị ngwa 600 AppImage nke a chịkọtara na "ụlọ ahịa" ya, nke nwekwara ezigbo akụkụ ọhụụ, ọ na-ekesa ha site na otu, nke anyị hụrụ ihe ndị a:
Ngwa ọrụ mmepe
Ihe eserese na foto
Nkwurịta okwu na akụkọ
Gịnị kpatara AppImage?
AppImage adịghị ewu ewu dịka Snap na Flathub bụ, ebe ọ bụ na tumadi Ọ dịghị mfe ịchọta ngwa na usoro a ebe ọ bụ na 2 gara aga nwere ụlọ ahịa ha na nke a na-eme ka ihe dị mfe.
Nke a bụ ebe AppImageHub nwere ọtụtụ ala iji nweta ma chọpụtaE wezụga nke ahụ, ihe ọzọ bụ na ọ bụghị ọtụtụ ndị ọrụ na-amasị ya maka ojiji nke AppImage.
Ọbụna ha nwere nnukwu ihe dị mma enyere na ngwa ahụ na-agba ọsọ site na faịlụ ahụ, nke anyị nwere ike ịnwe na mkpanaka USB ma ọ bụ usoro nchekwa nchekwa kachasị amasị ma na-agba ngwa anyị na kọmpụta ọ bụla na-enweghị "ntinye"
N'aka nke ọzọ, ọ na-emekwa ka ọ dịrị onye ọrụ mfe ịnwale ngwa n'emebighị sistemụ ha ma jupụta na ịdabere na ngwugwu ndị ọzọ.
Obi abụọ adịghị ya AppImage nwere ọtụtụ ala ma ọkachasị n'akụkụ nke ndị mmepe ahụ nye ya ohere ha iji kesaa ngwa ha na usoro a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » AppImage nwere ngwa ngwa "AppImageHub"
Ubuntu Touch OTA-7 dị ugbu a na ọtụtụ ndozi
3 ngwa ngwa nyocha nke ị nwere ike iji na Linux